I-Enthymeme - Inkcazo kunye nemizekelo
Ngengqiqo, i- enthymeme yi- syllogism echazwe ngokungaqhelekanga ngesigqibo esichaziweyo. I-Adjective: enthymemic okanye enthymematic . Kwakhona kwaziwa ngokuba yi- syllogism ye-rhetorical .
U-Stephen R. Yarbrough uthi: "Iingxelo zengxelo zifikelela kunokwenzeka, kungekhona izigqibo eziyimfuneko-kwaye ziyakwenzeka, kungekho mfuneko, ngenxa yokuba azinakulawulwa ngokuhambelanayo, njengoko zizo zonke izivumelwaniso" ( Ulwabelana ngesondo , ngo-2006).
Kwi- Rhetoric , u-Aristotle uyaphawula ukuba i-enthymem "yintsimbi yeengqiqo," nangona ehluleka ukunika inkcazo ecacileyo ye-enthymeme.
Jonga imizekelo kunye nemiba engezantsi. Kwakhona, bonani:
Ukususela kwisiGrike, "ingcamango"
"Ngegama elifana neSmucker, kufuneka lilungele."
(isiqendu se-Smucker's jams, jellies, kunye nokugcina)
"[M] nabazali banquma ukuthenga abazalwana bam izibhamu." Ababethi 'i-BBs,' izibonda zethusi abazalwana bathi baya kubulala iintaka. Ngenxa yokuba ndiyintombazana, andifumani imbhamu. "
(Alice Walker, "Ubuhle: Xa omnye uDancer yi-Self." Ukukhangela iIgadi zeeMama zethu, iHarcourt Brace, ngo-1983)
"Ukuba usuphilisiwe okanye usindiswe okanye usikelele nge-TBN kwaye ungazange uncedise ... uphanga uThixo kwaye uya kulahla umvuzo wakho ezulwini."
(UPaul Crouch, umsunguli-mququzeleli woNxibelelwano lweZiqu zintathu, ocatshulwe nguWilliam Lobdell, Iveki , uAgasti 10, 2007)
"Omnye wabantu abakhulu baseSoviet Georgia babecinga ukuba uDannon wayengumgodla ogqwesileyo, ufanele azi. Udla iminyaka ye-yogurt iminyaka eyi-137."
(I-1970 ye-TV ye-Dannon Yogurt)
"Ukuba i-Borden's, kufanelekile."
"Ufuna ukuba abe yindoda engaphezulu? Zama ukuba ngowona mfazi!"
(i-slogan yentengiso yeCoty perfume)
"Ngezihlandlo zanamhlanje, i- enthymem sele ithathwa njenge-syllogism esicacisiwe-oko kukuthi, isitatimende sokuphikisana esinezigqibo kunye nesinye isakhiwo, esinye isigxina sichazwayo. Isitenje esinje siya kuthathwa njenge-enthymeme : 'Kumele abe ngumbutho wezenhlalakahle kuba uthanda i-tax tax tax.' Nantsi isiphelo (Uthi-ntlalontle) uye wathatyathwa kwisigxina esicacisiwe (uthanda i-tax-income tax) kunye nesiseko esicacisiweyo (mhlawumbi [a] Nabani na othanda i-tax-tax tax-taxist is a socialist or [b] A intlalontle nantoni na othanda i-tax-income tax). "
(U-Edward PJ Corbett noRobert J. Connors, i- Classical Rhetoric yabafundi baNamhlanje , i-Othford University Press, ngo-1999)
Amandla okuPhukisa we-Enthymeme
"U-Aristotle wayeyixabisa amandla okukholisa enthymeme kuba wayeyazi kakuhle ukuba xa kuthethwa ukuthetha nokubhala kwansuku zonke, ingxabano ayifanele ibe yinkqubo yamanzi ukuba ithathwe ngokungathí sina. -nokuba abaphulaphuli bakho bacingisise ngenyameko yakho - xa bengenakuthemba wena, uyisondlo [ ethos ]. Oko utshoyo, okanye ubhale, kufuneka wenze abantu bazive into ethile [i- pathos ]. kufuneka zihlanganiswe kunye nabaphulaphuli abathile engqondweni kuba ingxabano ejoliswe kuzo zonke iithagethi ilahlekelwa ngokuthe tye.
" Ukuqikelela ukuba yintoni inxalenye yam entloko ye-enthymeme eyenza ukuphulaphula intetho enonwabo kubaphulaphuli. Ngokubamema ukuba banikeze isiqwenga sokungqubuzana, i-enthymeme ikhuthaza ulwalamano olusondeleyo phakathi kwesithethi-okanye umbhali - kunye nabaphulaphuli. Abaphulaphuli ababandakanyekayo ekudaleni umyalezo owabelwana ngawo - ingakumbi ebonisa iinkolelo zabo kunye nokubandlulula - kunokwenzeka ukuba banokuziva ukufaneleka kwezinto eziphikisanayo ezingekhoyo.
"Ngo-Aristotle, i-enthymeme yayiyinyama kunye negazi lobungqina . Akumangalisi ukuba abaqeqeshi bobugcisa bazo zonke iifrikansi nje abanako ukufumana ngokwaneleyo. " (IMartin Shovel, "Enthymeme, okanye Ngaba Ucinga Ngento endiyicinga? I-Guardian [UK], uEpreli 9, 2015)
U-Antony's Enthymeme kuJulius Caesar
"Ngaloo ndlela ye- enthymeme apho enye indawo ishiywe khona, kukho ukutyeba okunzulu ukuvuma isiphetho ngaphandle kokuhlolisisa imigaqo engekhoyo apho ingxabano ihlala khona. Ngokomzekelo, i-plebians, eshukunyiswa ngu-Antony ukuthetha kaKesare, ihamba ngokukhawuleza kunikezelwa kwisigqibo ayifunayo:
U-Plebian: Matshi amazwi akhe? Akayi kuthatha isithsaba. Ngoko ke, ngokuqinisekileyo wayengenaso isifuba.
[UWilliam Shakespeare, uJulius Caesar III.ii]
Abayikubuza into ebalulekileyo, umntu olahla isithsaba akayikuthanda. Bajonga isigqibo ngokuqinisekileyo. "
(Udade uMiriam Joseph, uShakespeare Ukusetyenziswa koBugcisa beeLwimi , ngo-1947. Ishicilelwe ngu-Paul Dry Books, 2005)
UMongameli uBush u-Enthymeme
" Ngomlomo , isithethi sakha ingxabano kunye nenxalenye enye isuswe, iholele abaphulaphuli ukuba bagcwalise isiqwengqo esingekho. Ngomhla ka-Meyi 1, bethetha ukusuka e- USS Abraham Lincoln , uMongameli uBush wathi, 'Imfazwe yase-Iraq yinto enye kwimfazwe yongxwaba eyaqala ngoSeptemba 11, 2001, kwaye iyaqhubeka ... Ngaloo ntshutshiso, izigubungela kunye nabalandeli babo bavakalisa imfazwe eMelika. Le ngxabano ye-intemmatic classic: Sasihlaselwa ngo-Septemba 11, ngoko sahamba siye ekulweni ne-Iraq. "Ingqungquthela engekhoyo - 'Saddam ibandakanyeke ngo-9/11' - kwakungafuneki kuthiwe ngokuvakalayo abo baphulaphulayo bafana nomyalezo walo. "
(Paul Waldman, Washington Post , Septemba 2003)
"Ngowe-1964, iipolitiki zahlutha, kwaye ukhetho lwaba yiVote Democratic okanye Die. Enye yeentengiso ezona ziphikisana nazo zibonise intombazana encinci, konke ukungabi namacala, ukuthabatha iipalali kwintsimi. Elilizwi elincinci, elincinci, ubala iipalali njengoko ekhupha, 'Omnye, ezimbini, ezintathu. . ' Xa efika kwishumi, umfanekiso unqabile, kunye nezwi elibi lomntu liqala ukuphindaphinda elishumi (njengokwi-nuclear blast countdown). Ngomhlaba, indawo iyaqhambuka kwisiqhumane senyukliya. Izwi livakala: 'Le yimiba - ukwenza umhlaba apho bonke abantwana bakaThixo bahlala khona okanye bahambe ebumnyameni, simele sithandane okanye sifanele sife.' Abavoti bafumana umyalezo: Ivoti yomdlali we-Johnson weGoldwater yivoti yamantombazana amancinci afile. Ekugqibeleni, abadlali beentombi ezincinane abafayo abazange babe yingxenye enkulu yabakhethiweyo. "
(Donna Woolfolk Cross, Mediaspeak: Indlela iThelevishini eyenza ngayo ingqondo yakho .) Coward-McCann, 1983)
Ukubizwa: I- EN-tha-meem
Nguwuphi umzekeliso kwi-Rhetoric and Composition?
Inkcazo kunye neMimiselo yeeLwimi zoLwazi
Ukunciphisa (iifomu zegama)
Yintoni i-Crot in Composition?
Chunk (uLwimi lokuFumana)
Dissolve Definition (Ukuchithwa kweKhemistry)
Indlela yokufumanisa ukuba iSikole sakho sihlaselwa
I-Cómo i-Unlimos e-Inmigración de Estados Unidos (yaiver)
Oh, la la! Voulez-Vous Coucher avec Moi Ce Soir?
Indlela yokudibanisa isiNgesi esingaqhelekanga sesiFrentshi 'Mettre' ('Ukubeka')
Yintoni iFeng Shui? UFeng Shui uhambelana njani ne-Architecture?
I-Pepper ne-Science Science Magic
Ukuphila Nabantwana Bakho Emva kweKholeji
Iingoma eziphezulu zamaKristu - ngoJanuwari 2015
Ukuzibandakanya: Ukudibanisa kunye nokuxhuma izivakalisi
UStep Curry - iNBA Superstar
Iingoma eziphezulu zeBerlin zee-80s
Ngaba iiNqanawa zaziza kusinda ibhomu le nyukliya?
Umbala wePeriodic Table of Elements - iMasomic Masses
I-Palm Beach Atlantic University
IEP Iinjongo zeMathematika zePlastiki zePrayimari, imisebenzi kunye neAlgebra
Ukugquma Okumnyama - Yintoni Eyiyo nendlela Esebenza ngayo
Yintoni iHighfer Handicap iGolfer ingaba nayo?
Amanqabana aseCallaway yaseBaltha yaseBrazil yaseBratha
Ukusebenzisa i-Broach ne-Brooch ngokuchanekileyo
Umhlaba Unemihlathi Engama-3 Trillion